Dadka naafada ah - InfoFinland
Nolosha Finland > Caafimaadka > Dadka naafada ah
Sida uu sharciga Finland qabo, qofna looma faquuqi karo naafo darteed. Qofka naafada ah wuxuu xaq u leeyahay in uu ku noolaado nolol caadi ah, tusaale ahaan in uu wax barto, shaqeeyo ama uu qoys dhisto. Finland waxaa ay sidoo kale qawl-qaaday in ay u hoggaansameyso heshiiska naafada ee QM.
Waxaa laga yaabaa in qofka naafada ah ay ku adag tahay in uu ka soo baxo nolol-maalmeedka maalin kasta ah naafo ama jiro darteed. Degmooyinku waa in ay adeegyada aan laga maarmin u qabanqaabiyaan dadka naafada ah. Adeegyadaan tusaale ahaan waa adeegga gaadiid ku qaadista iyo caawiyaha. Haddii aad heysato ogolaanshaha joogitaan islamarkaasna aad ka tirsan tahay degmo Finland ku taal, waxaad xaq u leedahay adeegyada naafada ee degmada. Wararka dheeraadka ah ee adeegyada naafada iyo codsashadooda ka sii aqri bogagga InfoFinlandi Adeegga dadka laxaadka la’.
Finland waxaa ka jira ururo badan oo yoolkuudu yahay in ay hagaajiyaan derajada dadka naafada ah ay bulshada dhexdeeda ku leeyihiin. Ururadan waxaad talo iyo caawimaad uga heli kartaa tusaale ahaan codsashada adeegyada. Ururo badan ayaa waxey sidoo kale bixiyaan xilliyada firaaqada waxqabadyo iyo taageerada jaalka oo loogu tagalay dadka oo dhan da’ kasta oo ay jiraan. Macluumaadyada xiriirka ee ururada waxaad ka heleysaa bogagga Golaha naafada.
Finland waxaa sidoo kale ka shaqeeyaa xarunta kaalmada Hilma ee naafada dadka dalka u soo guuray, taas oo naafada dalka u soo guurtay iyo kuwa mudada dheer jiran u fidisa hagitaan adeeg iyo talobixin.
Ururada naafada ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii aad tahay indhoole ama aragaadu uu liito waxaad heli kartaa adeegyada loogu talagalay dadka aragga naafo ka ah. Haddii aad u baahan tahay qalabka caawimaadda, marka hore baaritaan dhakhtareed u tag rugtaada caafimaadka. Dhakhtarka ayaa qiimeynaya naafada aragaada kaddibna waxaad qaab baxnaano daawo ah u heli kartaa qalabka caawimaadda. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Adeegga dadka laxaadka la’.
Haddii naafada aad qabto darteed aad u baahan tahay tusaale ahaan kambuyuutar gaar ah ama makiinadaha guriga, waxaad kaalmo uga heli kartaa xafiiska sooshalka ee degmadaada. Si kastoo ay ahaato tani waa mid ka fiirsasho ku xiran, yacni helitaanka kaalmadu ma ahan mid la hubo.
Maktabadda dadka aragga naafada ka ah ee Celia waxaad ka amaahan kartaa buugaag cod ah, buugaagta qoraal dhibceedka leh, buugaag elekterkoonik ah iyo sawiro kor u soo baxsan. Maktabaddu waxey sidoo kale soo saartaa buugaag waxbarasho oo ay dugsilayda indhaha naafada ka ah iyo ardaydu ay u baahan yihiin.
Iskaashatada dadka aragga naafada ka ah waa urur yoolkiisu yahay hagaajinta derajada dadka aragga naafada ka ah ay bulshada ku dhexe leeyihiin. Iskaashatadu waxey sidoo kale bixisaa macluumaadyo iyo adeegyo badan oo faa’iido u leh dadka aragga naafada ka ah.
Qalabka caawinta ee ugu caadisan oo ay adeegsadaan dadka indhooleyaasha ahFinnish
Maktabadda dadka aragga naafada ka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dadka maqalka naafada ka ah waa dhegoolayaal ama waa kuwa uu maqalkoodu liito. Qaar badan oo iyaga ka tirsan waxey dadka kula xiriiraan luqada dhegoolaha. Finland waxaa laga isticmaalaa luqada dhegoolaha ee af Finnishka iyo Iswidhishka Finland. Dadka maqalka naafo ka ah waxey sidoo kale inta badan xirtaan qalabka maqalka.
Haddii aad u baahan tahay qalabka caawimaadda, marka hore baaritaan dhakhtareed u tag rugtaada caafimaadka. Dhakhtarka ayaa qiimeynaya naafada maqalkaada kaddibna waxaad qaab baxnaano daawo ah u heli kartaa qalabka caawimaadda
Tusaale ahaan waxaad heli kartaa dabsheegaha dadka maqalka naafada ka ah loogu talagalay iyo telefoonka qoraalka, si aad nabadgeliyo ugu deganaato gurigaada. Ka codso qalabka caawimaadda xafiiska sooshalka ee degamaada.
Adeeg turjubaan ayaad heli kartaa haddii aad naafada maqalkaada darteed aad ugu baahan tahay tusaale ahaan shaqada, waxbarashada ama dan-qabsashada. Turjumistu waxey noqon kartaa tusaale ahaan turjumista luqada dhegoolaha ama turjumis qoraal ah. Ka codso Kelada xuquuqda isticmaalista adeegga turjumaadda.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qalabka caawimaadda iyo adeegga turjumaadda ka aqri bogga InfoFinlandi Adeegga dadka laxaadka la’.
Internetka waxaa laga helaa qaamuuska luqada dhegoolaha ee Finnishka oo la yiraahdo Suvi.
Iskaashatada Maqalka iyo iskaashatada dhegoolayaashu waa ururo uu yoolkoodu yahay hagaajinta derajada dadka maqalka naafada ka ah ay bulshada ku dhexe leeyihiin. Iskaashatadu waxey sidoo kale bixisaa macluumaadyo iyo adeegyo badan oo faa’iido u leh dadka maqalka naafada ka ah.
Qalabka caawinta maqalkaFinnish
Adeegyada turjumaada ee naafadaFinnish | Iswidish
Macluumaad la xiriira dalada ururada maqalkaFinnish
Macluumaad la xiriira ururada dhagooleyaashaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Waxbarashada loogu talagalay dhegoolayaasha dalka u soo guurayFinnish
Dadka curyaanka ah
Qofka curyaanka ah kaligiis ma dhaqdhaqaaqi karo haddii uusan qalabka caawimaadda heysan. Curyaannimada waxaa sababi kara cudur, shil ama sababo dhinaca hiddosidaha ah.
Haddii aad u baahantahay qalabka caawimaadda, marka hore baaritaan dhakhtareed u tag rugtaada caafimaadka. Dhakhtarka ayaa qiimeynaya curyaannimadaada kaddibna waxaad qaab baxnaano daawo ah u heli kartaa qalabka caawimaadda
Haddii ay tahay in gurigaada laga qabto hawl wax looga beddelayo ama ay tahay in qalabka caawimaadda lagu rakibo, waxaad magdhaw uga heli kartaa degmadaada. Guriga waxaa laga dhigi karaa mid lagula dhex-socon karo kursi shaagle. Qalabka caawimaadda ee guriga ku rakiban waa tusaale ahaan gacmo ama daab la kaalmeysto, marin ama sallax siman iyo albaabo koronto ku shaqeeya. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qalabka caawimaadda iyo hawsha wax ka beddelista ka aqri bogga InfoFinlandi Adeegga dadka laxaadka la’.
Taageero iyo waxqabad ku socda dadka laxaadka la'Finnish | Iswidish | Ingiriis
Naafada garaadku waxey saameyn ku yeelataa barashada iyo fahamka waxyaabaha cusub. Qofka garaad ahaan naafo ka ah waxaa ku adag waxbarashada iyo xusuusashada marka loo barbardhigo dadka kale. Naafannimada garaadka waxaa inta badan la ogaadaa carruurnimada ama dhallinyaranimada.
Dadka garaad ahaan naafo ka ah waxaa loo fidiyaa adeegyo gaar ah oo kala duduwan. Adeegyadaas waa tusaale ahaan adeegyada deegaanka, waxqabad shaqo iyo waxqabad maalmeed. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dadka garaadka naafada ka ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Adeegga dadka laxaadka la’.
Waxaa sidoo kale jira ururo badan oo laga helo macluumaadyo iyo kaalmooyin. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa tusaale ahaan bogagga shabakadda Iskaashatada naafada garaadka iyo Iskaashatada kaalmeysa dadka garaadka naafada ka ah.
Macluumaadka loogu talagalay ehelka dadka caqliga dhimmanFinnish
Ururka ilaaliya danaha dadka caqliga dhimmanFinnish | Ingiriis
Ururka ilaaliya danaha dadka caqliga dhimmanFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 03.01.2022 Boggan war-celin ka soo dir